छोराछोरीको बारेमा राम्रो नयाँ कविताहरू - आफ्नै बच्चा बिना भावनात्मक
बच्चाहरु को बारे मा कविताहरु
तितली / मलाई कसरी भयो
बच्चाहरु को बारे मा उद्धरण हमेशा पढ्न को लागि धेरै राम्रो हो, तर बच्चाहरु को बारे मा मायालु र भावनात्मक कविता अझै पनि एक कदम उच्च छ।
तपाईंसँग हाम्रो निम्न कविताहरू राम्ररी फेला पार्न बच्चाहरू आफैलाई छैन। बच्चाहरु को बारे मा निम्न कविताहरु को पढन को आनंद लें।
हामीका साइटहरू र प्रतिलिपि अधिकार जानकारीको सन्दर्भमा अनुमति दिनका लागि हामी पाठको थप प्रकाशन।
हामीलाई जोडिने तारहरू
दृश्यात्मक, झलक, असीमित छन्।
हामी हरेक दिन अचम्म लाग्यौं र खोज्छौं
सधैं तपाईं मा नयाँ प्रतिभा।
त्यसैले तपाईं हाम्रो आँखा खोल्नुहुन्छ,
हामीलाई हृदयको न्यानो देखाउँछ।
कहिलेकाहीँ विश्वास गर्न कठिन
तपाईं कसरी सत्य र बुद्धिमान हुनुहुन्छ?
तपाइँ कथाहरू र चित्रहरू निर्माण गर्नुहुन्छ
महल, पेड हाउस, समुद्र।
निर्दोष, गहिरो "हामी"
यसले हामीलाई र हाम्रो एकता बताउँछ।
केहि दिन हामी यसलाई बुझ्दैनौं,
तर तपाईं हामीलाई वास्तविक जीवन देखाउनुहुन्छ।
तपाईलाई धन्यवाद हामी शुद्ध प्रकाश अनुभव गर्छौं,
त्यो पनि हामीलाई आकस्मिक हुन्छ।
(सी) अनी रबी कविता PDF कागजातको रूपमा / Jpg ढाँचामा कविता
सामान्य क्षण - बच्चाहरु को बारे मा कविता
धेरै चीजहरू सुरु हुँदैछन्, जारी राख्नुहोस्।
समयको पास निर्धारण, जुन कहिल्यै खडा छैन।
यति धेरै अझै पनि तपाईंको लागि पहिलो कदम हो,
तपाईं बढ्दै हुनुहुन्छ र पत्ता लगाउनुहुन्छ, तपाई दृश्य विस्तार गर्नुहोस्।
हामीलाई रोजगारीको जीवनको धेरै मागहरू।
हामी काम र कलाले भरिएको छ
यो झूटो हुन सक्छ, पल को उपहार
पत्ता लगाउन - कुन एकता छ, के के फरक छैन।
यद्यपि समयले धेरै चीजहरू निर्धारण गर्छ
र अब तपाईं धेरै आवाजहरू सुन्न सक्नुहुन्न,
कामलाई अलग राख्नुहोस्।
तिनी टाढा दौड्दैनन्, पाँच वा सातमा
आउँदो इंद्रधनुषको आनन्द लिनुहोस्
यसको प्रकाश नृत्य तरंगहरूको सम्झना हो।
तपाईंको विकास स्थिर छ, सबै कुरा सम्भव छ।
यस्तो क्षण महत्त्वपूर्ण, समझौता हो।
(सी) अनी रबी
आमाबाबु र बच्चाहरुका बारेमा सुन्दर कविताहरू
अर्कोबाट अर्को दिन
यो चिन्ता र रङ्ग थियो, म सुरु भएको थियो।
कोठा धेरै चरणहरूले घेरिएको छ,
तिनीहरूको लुत्तेबाट, तिनीहरूका कुकुरहरू।
एक सानो प्राणी कसरी छ
यति अचम्म, यति ठूलो छ?
सबै शोरले सबै शोरको साथ
मैले लगभग सोचेँ कि म पागल हुदै थिएँ।
किनकी हरेक दिन एक पार्टी जस्तै थियो
किनकि मेरो टाउको आफ्नै हो।
वर्षहरू पछि लागेपछि
मेरो भित्री भइरहेको छ।
मेरो आफैं सुरक्षित छ जस्तो
रंगीन Chaos बच्चाहरु को भूमि मा।
यो चुप भयो, म सक्षम छु
सानो विश्वास कसरी भयो यो कसरी भयो
वर्ष पछि मेरो तितली।
अब तपाईं उड्नुहुन्छ, म लामो समयसम्म
तिम्रो सबै आनन्द, हरेक दृश्य।
अर्कोबाट अर्को वर्षसम्म
मलाई बुझ्दछ, जस्तो भयो।
हामी हाम्रो सङ्कलनमा बच्चाहरूको बारेमा अझ सुन्दर सुन्दर कविहरू थप्न खुसी हुनुहुन्छ! के तपाईं बच्चाहरु को आसपास एक विशिष्ट विषय छ, जसको लागि तपाईं एक उपयुक्त कविता को कमी छैन? हामीलाई कुरा गर्नुहोस्हुन सक्छ हामी मद्दत गर्न सक्छौं।
बच्चाहरु को बारे मा उद्धरण
प्रेम कवि | माया र मायाको बारेमा कविता
जेब पैसा | बच्चाहरु को शिक्षा
बच्चाहरू खेल्न र गुमाउन सिक्नुपर्छ
बच्चाहरु को सामाजिक व्यवहार | शिक्षा बच्चाहरु
मलाई किन बच्चाहरु चाहनु हुन्छ? शिक्षा
बच्चाहरु को शिक्षा | कामुकता
बच्चाको अलमारीमा अर्डर गर्नुहोस् | शिक्षा
म कसरी छोराछोरीको आत्म-सम्मानलाई बलियो बनाउन सक्छु?